Dhibaatadii ugu horeysay ee reer Marooko | Safarka Absolut
Dhibaatadii ugu horeysay ee Marooko
Dagaalkii Koowaad ee Adduunka ka hor, adduunku wuxuu ruxay suurtagalnimada isku dhac u dhexeeya quwadaha waaweyn ee reer Yurub ee waqtigaas jiray. Xarunta xudunta dhibaatadu waxay ahayd magaalada Tangier, meeday taariikhdii casriga ahayd ee loogu yeedhay Dhibaatada ugu horeysa ee Morocco, intii u dhaxeysay 1905 iyo 1906.
Si loo fahmo wax walba oo dhacay intii u dhaxeysay Maarso 1905 iyo May 1906 agagaarka magaalada Tangier, waa in la ogaadaa waxa juqraafiga siyaasadeed ee waqtigaas ahaa. Yurub gudaheeda, iyo dunida kale inteeda kale, jawi caalami ah oo kacsan ayaa dhex maray quwadaha waaweyn. Waxay ugu yeedheen Nabadda hubeysan. Goobta ugu fiican ee lagu beero dagaalka weyn ee dhici doona toban sano kadib.
Sanadahaas UK iyo Faransiiska sameeyey isbahaysi loo yaqaan magaca Entente Cordiale. Siyaasadda arrimaha dibedda ee dalalkan waxay ku salaysnayd isku dayidda go'doominta Alemania dhinacyada caalamiga ah ee saamaynta ku leh, gaar ahaan Aasiya iyo Afrika.
Ciyaartan dhexdeeda, bishii Janaayo 1905 Faransiisku wuxuu ku guuleystey inuu ku soo rogo saameyntiisa suldaanka morocco. Tani waxay si gaar ah u khusaysay reer Jarmal, oo si walaac leh u eegay sida ay xafiiltankoodu sidaas u xakameeyeen labada waji ee Badda Dhexe. Markaa Chancellor Von Bülow Wuxuu go aansaday inuu soo dhexgalo, kuna dhiiri geliyo Suldaanka inuu iska caabiyo culeyska Faransiiska wuxuuna u dammaanad qaaday taageerada Reich-ka Labaad.
1 Kaiser wuxuu booqday Tangier
2 Shirka Algeciras
3 Dhamaadka Dhibaatada Koowaad ee Marooko
Kaiser wuxuu booqday Tangier
Waxaa jira taariikh la dejinayo bilowga Dhibaatada Koowaad ee Marooko: Maarso 31, 1905, goorta Kaiser Wilhelm II wuxuu booqday Tangier si lama filaan ah. Jarmalku wuxuu ku xirtay doonyahooda xoogga badan dekedda, iyagoo soo bandhigaya awood. Saxaafadda Faransiiska ayaa si kulul u shaacisay in tani ay tahay ficil daandaansi ah.
Iyagoo wajahaya culeyska sii kordhaya ee Faransiiska iyo xulafadiisa, Jarmalka waxay soo jeediyeen in la qabto shir caalami ah si loo raadiyo heshiis ku saabsan Morocco iyo, si lama filaan ah, dhulalka kale ee Waqooyiga Afrika. Ingiriisku wuu diiday fikradda, laakiin Faransiiska, isaga oo adeegsanaya wasiirrada arrimaha dibedda Téophile Delcassé, ayaa ogolaaday in laga wada hadlo arrinta. Si kastaba ha noqotee, wadahadaladii waa la baabi'iyay markii Jarmalku si cad isu taagay isagoo taageersan madaxbannaanida Marooko.
Taariikhda shirka waxaa loo cayimay 28-ka May, 1905, laakiin midkoodna awoodaha loo yeeray looma jawaabin si togan. Intaa waxaa dheer, Ingiriiska iyo Mareykanku waxay go'aansadeen inay u diraan doonyadooda dagaalka Tangier. Xiisadda ayaa sii korodhay.
Wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee Faransiiska, Maurice rouvier, ka dibna kor u qaaday suurtagalnimada in lala xaajoodo Jarmalka si looga fogaado dagaal in ka badan suurtagal ah. Labada dalba waxay xoojiyeen joogitaankooda millatari ee xuduudahooda, suurtagalnimada isku dhac hubaysan oo dhammaystiranna wuu ka badnaa hubaal.
Dhibaatada ugu horreysay ee reer Marooko weli lama xallin sababtoo ah jagooyinka sii kordhaya ee iska soo horjeeda ee u dhexeeya Jarmalka iyo kuwa sanadaha dambe cadaw u noqon doona mustaqbalka. Gaar ahaan Boqortooyada Ingiriiska, oo diyaar u ahayd inay adeegsato awood militari si ay u joojiso isbalaadhinta Reich. Faransiiska, oo ka baqay in lagu jebiyo iska horimaad militari oo uu kula galo Jarmalka Jarmalka, wuxuu ahaa mid dagaal yar.
Ugu dambeyntii, iyo dadaal badan oo diblomaasiyadeed ka dib, Shirka Algeciras. Magaaladan waxaa loo doortay maxaa yeelay waxay udhowdahay aagaga iskahorimaadka iyo dhul dhexdhexaad ah, in kastoo Espana waqtigaas waxyar baa la taagay dhinaca Franco-British.
Qaybinta aagagga saamaynta ee Morocco sida ku xusan shirkii Algeciras ee 1906
Saddex iyo toban waddan ayaa ka qaybgalay shirka: Boqortooyadii Jarmalka, Boqortooyadii Austro-Hungaria, Boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska, Boqortooyadii Ruushka, Boqortooyada Isbaanishka, Mareykanka, Boqortooyada Talyaaniga, Saldanada Marooko, Holland, Boqortooyada Sweden, Boortaqiiska, Biljam iyo Boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Marka la soo koobo, quwadaha waaweyn ee adduunka oo lagu daray waddamada qaar oo si toos ah ugu lug leh su’aasha Marooko.
Dhamaadka Dhibaatada Koowaad ee Marooko
Kadib seddex bilood oo wadahadalo ah, Abriil 17 the Sharciga Algeciras. Heshiiskan dhexdiisa, Faransiisku wuxuu awooday inuu ilaaliyo saameynta uu ku leeyahay Morocco, in kasta oo ay ballanqaaday inay dib u habeyn taxane ah ku sameyn doonto dhulkan. Gabagabada ugu muhiimsan ee shirku wuxuu ahaa kuwan soo socda:
Abuuritaanka Marooko ee Maxmiyad Faransiis ah iyo Maxmiyad Isbaanish ah oo yar (oo loo qaybiyay laba aag, mid koonfurta dalka iyo kan woqooyi), oo markii dambe lagu dhexmaaqay Heshiiska Fez of 1912.
Sameynta xaalad gaar ah Tangier oo ah magaalo caalami ah.
Jarmalku wuxuu ka tanaasulaa sheegasho kasta oo dhuleed ee Morocco.
Xaqiiqdii, shirkii Algeciras wuxuu ku dhammaaday tallaabo uu uga soo laabtay Jarmalka, oo awooddiisa baddu ay si cad uga liidato tan Ingiriiska. Xitaa sidaas, Qalalaasaha Koowaad ee Marooko waxaa lagu xiray si been abuur ah iyo qanacsanaanta Jarmalka waxay dhalisay xaalad cusub oo xasaasi ah 1911. Mararka qaar goobta ma ahayn Tangier, laakiin soo taabtay, xaalad cusub oo xiisad caalami ah oo loo yaqaan Qalalaasaha Labaad ee Marooko.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Dhibaatadii ugu horeysay ee Marooko
Geela, oo ah hab gaadiid aad u hufan
Kala duwanaanta dhaqanka ee Kanada